भिखारीको चेक साट्न बैंकमा पुगेन पैसा ! - Everest Dainik - News from Nepal
भिखारीको चेक साट्न बैंकमा पुगेन पैसा !
काठमाडौंः घटना लेबनानको सीदोन शहरको हो । त्यहाँको एक प्रशिद्ध अस्पताल बाहिर वाफा मोहम्मद नाम गरेकी महिला ४० वर्षदेखि दिनभर भिख माग्दै आएकी थिईन् ।
अस्पतालमा आउने जाने मानिषले दान दिएको पैषाबाट गुुजारा चलाउदै आएको बताउने उनले बैंकमा आफ्नो ब्यालेन्स बढाउदै लगेको कसैलाई थाहा थिएन । कसैले अनुमान सम्म पनि गरेका थिएनन कि कि उत्त भिख माग्ने महिलाले बैंकमा पैसा जम्मा गर्दे आएकी छन् भनेर ।
अन्ततः उक्त माग्ने महिलाको बैंक अकाउन्टमा यति धेरै पैसा भेटिएको छ कि बैंकले चेक नै साट्न सकेन । उनको खातामा झण्डै करोडौ रकम भेटिएपछि बैंकका कर्मचारीनै चकित परेका छन् ।अहिले ति महिलाले भिख माग्ने ठाउँमा यो विषय निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वाफा मोहम्मद आफनो पैसा अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गर्नका लागि पुगेकी थिइन् । त्यस क्रममा बैंकमा नगदको समस्या भयो । घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा दुईवटा चेक भाइरल भइरहेका छन् ।